Ogaden News Agency (ONA) – Haya’adaha UNHCR iyo ORC-Kenya oo kulamo looga arinsanayo qaxootiga Ogadenya yeeshay 13kii bishan
Haya’adaha UNHCR iyo ORC-Kenya oo kulamo looga arinsanayo qaxootiga Ogadenya yeeshay 13kii bishan
Posted by ONA Admin	/ September 14, 2011
Haya’adda u doodda Qaxootiga Ogadenya ee ku sugan dalka Kenya (Ogaden Refugee Community Kenya ) ayaa bishan 13keedii ka codsaday haya’dda QM ee UNHCR in dal 3xaad oo badbaada dhaama Kenya loo raadiyo qaxootiga Ogadenya. Arintan ayaa ka dambaysay ka dib markii dilal qorshaysan loogu gaystay xeryaha qaxootiga ee Ifo iyo magaalooyinka Garissa iyo Nairobi dad shacab ah oo ka mid ah qaxootiga Ogadenya, taasoo la xaqiijiyay inay Itobiya ka dambayso oo dagaalka ka dhexeeya ciidamadeeda iyo jabhadda ONLF doonaysa inay u soo rarto dawladaha dariska ah sida Kenya.
Nin madaxda ORC-Kenya ka mid ah ayaa sheegay in saraakiisha UNHCR Kenya ay la kulmeen ay ka mid ahaayeen saraakiisha qaybaha kala ah – Protection Unit, Community services Unit, Eligibility Unit -, iyadoo warbixnta ay haya’adda – Ogaden Refugee Community Kenya – u gudbisay lagu xusay dilalkii qorshaysnaa ee ka dhacay Kenya oo lagu kala dilay Allaha u naxariistee Kamas Dhabar oo xerada Ifo lagu dilay 5tii Feberaayo, Sh. Maxamad Dubad oo lagu dilay Gaarrisa 18kii Febraayo, Cabdi Cadulaahi oo lagu dilay Nairobi 20kii Juun, Abdirisaq M. Tiibaa oo lagu dilay xerada Ifo 19kii Ogosto.
Waxay kaloo xuseen guddiga ka socday ORC in 5tii bishan Sebtember lagu afduubay Nairobi Cabdi kaafi Ismaaciil, kolkaasoo ay shabakadaha Itobiya ee lagu qoro afka Somaliga ee xaajo, cakaarranews, Somalistate iyo wabishabeele ay isla waqtigkiiba shaaciyeen in la dilay Cabdi Kaafi inakstoo uu ka badbaaday oo aan lagu guulaysan shirqoolkaa, baadhitaankii arintaa ku saabsanaana uu weli socdo.
Waxay hayadda ORC in dadkaa la dilay ay dhamaantood ahaayeen xubno firfircoon oo waqt ka mid ah un ka soo horjeeday xukuumadda KT Meles Zinawi. Waxay ha’adu u cadeeyeen UNHCR inuu dilalkan qorshaysan sii socon doono maadaama uu dagaalka ka socda gudaha Ogadenya uu sii xoogaystay.
Sidaa darteed waxay haya’dda Qaxootiga Ogadenya –ORC- codsadeen in xal loo helo lagu badaabdiyo qaxootiga Ogadenya oo nabadgalyadooda ay khatar ku tahay Kenya taasoo ah in dal 3xaad la geeyo.
Waxay isla garteen labada haya’dood in shir dambe la’isugu soo noqdo oo arimahan lagu gorfeeyo.
Waxaa xusid mudan in dilalka loo gaystay dadkaa shacabka ah ee ka soo horejeeday gumaysiga Itobiya ay iska kaashadeen sida ku cad warar sugan qaar wadaadnimo sheeganaya oo ka mid ah ragga u ololaynaya in Itobiya la’isu dhiibo, xubno lagu soo diray Jigjiga oo ka mid ah Ajo-gudhay, safaaradda Itobiya qaybta sirdoonka oo xidhiidhinaya kooxahaa.
Sida ay sheegeen haya’adda Qaxootiga Ogadenya ee Kenya –ORC- shabakadahaa u adeega gumaysiga Itobiya ee kala ah xaajo, cakaaranews, Somalistate iyo wabishabeele, ayaa isla markii la afduubay Cabdi Kaafi waxaa ka mid ahaa waxyaabaha ay qoreen;
XOL:Wardagdag ah oo naga soo gaadhay dalka Kenya ayaa sheegaya in masuuul sare oo ka tirsan Kooxda Asmara laguna magacaabi jirey Cabdi Kaafi lagu diley dalka Kenya.
Cabdi Kaafi oo ahaa xubin ka tirsan golaha dhexe ee kooxda Asmara kana mid ahaa ragga ugu muhiimsan kooxdan ayaa dilkiisu noqonayaa mid dhacaya bilo kadib uun markii isla magaalada Nairobi lagu diley Cabdi Cabdullaahi oo maydkiisa laga helay meel kamid ah magaalada Nairobi. Ma ahan markii ugu horeysey ee saraakiil sarsare oo ka tirsan kooxda Asmara lau diley dalka Kenya balse waxay noqoneysaa sanadkii ugu dilalka badnaa ee masuuliyiin sarsare oo ka tirsan kooxda Asmara lagu laayo dalka Kenya.
Waxay arintan muujinaysa inay shabakadahaa la socdeen arinta oo midkood walba uu doonayay inaan warka xiisaha u leh looga hormarin. Waxay arimahan ka mid yihiin taariikhda halganka shacabka Ogadenya, mana hakin karaan geedi socodka gobanimada munaafiqiintaa isbiirsaday.
Halgamaa Xasan dheere says:
Walaale warka waa kaa qaldamay, saddexda shabakaddood ee Cakaara, Wabishabeele, Somalistate iyo Xaajo ma soo wada qorin warkan. Hadalkaa dib ugu noqo. Mida kale, saddexda website ee Somalistate, Wabishabeele iyo Xaajo waa private, halka Cakaara ay leedahay dowladda, marka taasna sidaas u ogow, yaanan warka la isku qasin websiteyada aad magacaawday qaar baa dhexdhexaad ah.
“Waxay arintan muujinaysa inay shabakadahaa la socdeen arinta oo midkood walba uu doonayay inaan warka xiisaha u leh looga hormarin. Waxay arimahan ka mid yihiin taariikhda halganka shacabka Ogadenya, mana hakin karaan geedi socodka gobanimada munaafiqiintaa isbiirsaday.”
waa saas, guushana halgamaha ayaa iska leh insha allaah.